Peach pruning | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Sokajy Peach pruning
Ny fomba hiatrehana ny ravina mihintsana
Ny paozika dia hazo malemy izay matahotra ny hatsiaka, ny bibikely samihafa ary, mazava ho azy, ny aretina. Ny iray amin'ireo karazana sy mampidi-doza indrindra dia antsoina hoe peach leaf curl. Inona moa izany, ary ahoana no hiatrehana izany, milaza aminao manaraka. Fantatrao ve? Ny toerana misy ny paiso manerana izao tontolo izao dia tsy fantatra mazava. Ny mpikaroka dia nanapa-kevitra fa akaiky io toerana io, ilay vorona mpirenireny, Prunus davidiana Franch, izay hita manakaiky an'i Beijing (Shina).
Ny endriky ny lohataonan'ny lohataona
Mba hisorohana ny fahadisoam-panantenana sy ny fahadisoam-panantenana, ny fikarakarana ny hazo toy ny mpangalatra toy ny pao dia tokony ho fakan-tahaka - marina, raha tsy manao tsinontsinona ireo zavatra madinika. Noho izany dia heverinay amin'ny an-tsipiriany ny asa lehibe iray manan-danja - fanongotam-bozaka, natao tamin'ny lohataona. Ny lohataonan'ny lohataonam-bolo dia nofongarina mba hananganana satroboninahitra voajanahary eo akaikin'ny hazo, t.
Karakarao ny paozin'ny lohataona - asa tsy maintsy atao sy mendrika
Ny hazo pelaka dia iray amin'ireo kolontsaina tranainy indrindra amin'ny olombelona. Tany am-boalohany, io zavamaniry io dia nitombo tany amin'ny firenena somary hafahafa ihany. Saingy, nandritra ny taona maro dia nitombo ny paoziny ary niaraka taminay. Azo atao izany satria vokatry ny voankazo mangatsiaka tamin'io voankazo matsiro io.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Peach pruning